नोभेम्बर 11, 2018 साइन्स इन्फोटेक	5 Comments डा. राम बहादुर बोहरा, हिन्दू
नेपालीहरू बेरोजगार मेटाउन धर्म परिवर्तन गर्न चाहन्छन् भने विदेशीहरू खुसी साटासाट गर्न धर्म परिवर्तन गर्दछन् । यहाँ फरक यति नै छ । आज नेपालमा विदेशी नागरिकहरू हिन्दू धर्म सवैभन्दा राम्रो भन्दैछन् । तर नेपालीहरू धर्म परिवर्तन गरेर स्वाङ देखाउछन् यो आफैमा राम्रो देखिएको छैन । नेपाली धर्म संस्कृति हरेक धर्मको तुलनामा राम्रो छ यसले कुनै भेदभाव नगरी सवै धर्म संस्कृतिलाई समान स्थान दिन सफल देखिएको छ ।
धर्म संस्कृतिमा लोभ-लालच गर्नु राम्रो होइन यसले आपसी प्रेम भावना खलल पुराउन सक्ने देखिएको छ । धर्म भनेको आफ्नो बाबु बाजेले मान्दै आएको परम्परा हो यसको जगेर्ना गर्नु हरेक नेपालीको नैतिक दायित्व हो । धर्म संस्कृतिले आपसमा जोड्ने काम गर्छ भने धर्म संस्कृति नमान्नाले फुट पैदा गराउन थाल्दछ । विश्वको सवैभन्दा पुरानो धर्म भनेको हिन्दू धर्म हो यो कसैले नकार्न सक्दैन । यो धर्म सवैभन्दा पवित्र छ ।
कुनै पनि धर्म मान्नुस धर्म संस्कृति मान्ने तरिका मात्र भिन्द हुन सक्छ तर जग सवै एउटै हो । आज हामीले परधर्म अगाल्दै हिड्छौं भने यसमा स्वार्थ छिपेको हुनाले मानिसलाई गलततर्फ उनमुख गराउदै लग्ने छ । अब हामीले धर्मको जग बलियो बनाउदै विदेशीलाई समेत यो धर्ममा प्रवेश गराउन सकेको खण्डमा धेरै राम्रो हुनेछ । विश्वमा स्वार्थमा नडुबेको धर्म भनेकै हिन्दू धर्म हो यो जस्तो चोखो धर्म अरू हुनै सक्दैन ।
← प्रत्येक विहान यी कामहरु गर्नुहोस् चम्किनेछ भाग्य
शिवजीलाई प्रसन्न गराउन भक्तहरूले जान्नुपर्ने उपायहरू →
5 thoughts on “हिन्दू धर्म संस्कृतिमा सबैको कल्याण”
Pingback:उहिलेका ऋषिमुनि आफूलाई इमान्दार प्रस्तुत गर्न कस्ता कस्ता सपथ खान्थे ? हेरौ
Pingback:ती अवला नारीको कथा
Pingback:यस्तो छ यज्ञ र हवनमा फरक, जानी राख्नुहोस् र शेयर गर्नुहोस्